Dhaxal aan la qiyaasi karin, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Weligaa miyaad dooneysay qof inuu albaabkaaga garaaco isagoo og in adeer hodan ah oo aadan weligaa maqal uu dhiman doono oo uu kaa tegi lahaa nasiib aad u weyn? Fikradda ah in lacagtu ay ka soo baxdo meelna waa mid xiiso badan, riyo dad badan iyo ujeedo buugaag iyo filimaan badan. Maxaad ku sameyn lahayd hodankaaga cusub ee aad heshay? Saameyn bay ku yeelan doontaa noloshaada? Miyuu xallin doonaa dhibaatooyinkaaga oo dhan miyaa kuu oggolaan doonaa inaad ku socotid jidka barwaaqada?
Rabitaankani adiga muhiim uma ahan adiga. Horay ayey u dhacday. Waxaad leedahay qaraabo hodan ah oo dhintay. Wuxuu ka tagay dardaaran oo uu adiga kuugu isticmaalay ka faa'iideysteha ugu weyn. Tan looma carqaladsiin karo lagumana burin karo maxkamad kasta. Midkoodna kani kuma kharash gareeyo canshuuraha ama qareennada. Dhammaantiin adigaa iska leh.
Waxa ugu dambeeya ee aqoonsigeenna Masiixa waa inuu ahaado dhaxal. Waxaan hadda gaarnay dhamaadka ugu sarreeya ee aqoonsigayaga - hadda waxaan ku jirnaa finalka weyn: "Waxaan nahay carruurta Ilaah iyo waxkasta dhaxla kuwa Masiix ee dhaxalkiisa nala wadaaga" (Gal. 4,6-7 iyo Rooma 8,17).
Axdiga Cusub wuxuu dhaqan galay dhimashadii Ciise. Oo annaguna dhaxal baannu nahay, oo ballanka uu Ilaah Ibraahim ugu qaaday oo dhan adigaa iska leh (Gal.3,29). Balanqaadyadii ku jiray dardaaranka Ciise lama barbar dhigikaro ballanqaadyada dunidu ku qabto rabitaanka adeer ahaan: lacag, guri ama gaari, sawirro ama qaawan. Waxaan leenahay mustaqbal wanaagsan oo ifaya oo qofkasta qiyaasi karo. Laakiin waa wax aan caqli gal ahayn annaga maxaa macnaheeda noqon doonta inaan joogno joogitaanka Ilaah si aan u baarno daa'imin, si geesinimo ahna u aado meel uusan nin hore tagin!
Markii aan furno dardaaran, ma aha inaan isweyddiinno waxa si hufan nooga haray. Waxaan hubin karnaa dhaxalkayaga. Waxaan ognahay inaan heli doonno nolosha weligeed ah (Tiitos 3,7), oo intaas lagu daray Boqortooyada Ilaah waxay u ballan qaaday dhammaan kuwa jecel isaga " (Jak. 2,5). Waxaa naloo siiyay Ruuxa Quduuska ah dammaanad inaynu maalin uun heli doonno wax walba oo annaga nalagu ballanqaaday dardaaranka (Efesos 1,14); waxay ahaan doontaa dhaxal aad iyo aad u weyn oo yaab badan (Efes. 1,18). Bawlos wuxuu ku yidhi Efesos. 1,13: isaga xaggiisa, markii aad maqasheen ereyga runta, kaas oo ah injiilka badbaadadaada, oo laydinku shaabadeeyey isaga xagga Ruuxa Quduuska ah ee ballanqaadka markaad noqotay rumaysta. Dareen ahaan, waxaan horeyba ugu soconnaa dariiqa barwaaqada. Xisaabaadka bangiga ayaa buuxa.
Ma qiyaasi kartaa sida ay tahay inay noqoto in la helo maalkan oo kale? Waxaa laga yaabaa inaan dareen ka helno haddaan qiyaasi karno tirada Disney ee miser McDuck. Dabeecaddan sawir qaade waa nin taajir ah oo wasakh leh oo jecel inuu aado khasnadiisa. Mid ka mid ah falalkiisa uu jecel yahay waa dabaasha dhammaan buuraha dahabka ah. Laakiin dhaxalka aan la leenahay Masiixu wuxuu noqon doonaa mid ka cajiiba inta badan hodantinimada khaldan.
Cidda aan nahay Aqoonsigeenu waa Masiixa. Waxaa naloogu yeeray inaan noqono carruurta Ilaah, oo cusub oo ina cusub oo nimcadiisa daboolay. Waxaa nalaga rajeynayaa inaan midho dhalanno oo aan muujino nolosha Masiixa, iyo in ugu dambeyntii aan dhammaanteen dhaxli doonno hodantinimada iyo farxadda aan nolosha dhadhaminay. Waa inaan waligeen isweydiin qofka aan nahay. Mana aha inaan raadino aqoonsigeena wax ama qof kale oo aan ahayn Ciise.